Maitiro Ekuchengetedza Musha neTea Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Maitiro Ekuchengetedza Musha neTea Tourism
Matekisheni etii aiita senhanho hofori dzinopenya, dzichipenya pasi pezuva rinorema rematsutso, sezvo miti yegirinhi yetii yakaishongedza yakamera nhungirwa mudhorobha reLiubao mukupera kwaGumiguru.
Yakanga ichangobva Kuburuka kwaFrost, 18th ye24 solar term, yakawira muna Oct 23. Vagari vemo vakanga vari mushishi kukohwa mashizha. Iyi yakanga iri nguva yakanaka yetsika. Kunhuhwirira kwemashizha kunoonekwa sekwakanyanya kunaka nekuda kwekusiyana kwetembiricha pakati pemasikati neusiku panguva ino yegore nemvura shoma inonaya.
Vakanga vasiri varimi chete vaivharika pakati pemiti, asi vashanyi vaiongorora runako rwekumusha rweguta rinogara muCangwu County, Wuzhou, iyo Guangxi Zhuang inozvitonga dunhu.
Vashanyi vanowanzounza manzwiro ekuita kuguta rinowanzo nyarara muna Gumiguru, maererano nevakuru veko. Vazhinji vavo vanoita zvinoitwa nevagari veko: vanotakura tswanda yemushenjere pamapfudzi avo uye vanotanha mashizha etii. Nomuzvarirwo, vanoisa mapikicha vachitarisana neshure kwemateru ari kuuya uye denga rakajeka rebhuruu.
Pakupera kwezuva, vafambi vanogona kuzvizorodza netii, vachidzidzira kufinya nekukungurutsa mashizha nenzira yechinyakare, ukuwo kunhuhwirira kunoteuka kubva muhari dzinopisa uye kunopinda mumhepo.
Kosima Weber Liu, wekuGermany, akashanyira dhorobha muna Gumiguru uye akafadzwa netii yaivepo, kunyanya kurapa kwayo.
"Ini ndaingonzwa nezve mabikirwo etii kare, asi ndakazoona kuti zvainge zvakaita sei kugocha tii ini," anodaro Liu.
Ane kunzwisisa kuri nani kwemaitiro uye tsika yakapoteredza.
"Ndakanzwa ndaenda kunzvimbo yakakosha, isinganzwisisike muChina."
Taundi reLiubao rave richizivikanwa netii yaro yakasviba iyo, kwemakore 1,500, yanga iri doro rekunaka. Iine mamiriro akakodzera ekugadzirwa kwetii, ine kuenzana kwehunyoro, kupenya kwezuva, ivhu uye kukwirira, anenge 600 metres pamusoro pegungwa, izvo zvinenge zvakanyanyisa kunaka kuti zvive chokwadi.
Liubao tii inoonekwa seimwe yeakanakisa munyika uye yakashumirwa mutero kuna Emperor Jiaqing panguva yeQing Dynasty (1644-1911).
Yakashandiswawo semushonga wemakwenzi kurwisa kupisa uye hunyoro mamiriro apo vanhu veChinese vakatamira kuSoutheast Asia mukupera kwezana ramakore re19.
Liubao tii inogona kugadzirwa kubva muchirimo kusvika pakudonha. Kunyange zvazvo mashizha kubva pakutanga kwechirimo achionekwa seakanyanya kunyorova uye nekudaro emhando yepamusoro, anotakura kunhuhwirira kwakasiyana kana kukohwewa mukudonha kwekupedzisira.
Vakuru venzvimbo vanga vachigadzira tii yakasanganiswa uye kushanya mumakore apfuura.
"Nevashanyi vakawanda, 'agritainment' inosanganisa pekugara, kurima uye kunhonga tii yatanga," anodaro Cao Zhang, munyori weBato wedhorobha reLiubao.
Mumusha weDazhong, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweLiubao, Liang Shuiyue aravira mabhenefiti ekushanya kumaruwa.
Anoita imba yekugara iyo inounza mari yakatsiga kumhuri yake.
Mari inowanikwa muDazhong yakasvika pa88,300 yuan ($13,810) gore rakapera, mushure mekunge vagari venzvimbo iyi vakurudzirwa kugadzira magadheni etii pasi pechirongwa chinounza pamwechete mabhizimisi, hutungamiriri hwemubatanidzwa pamwe nedzimba dzekumaruwa.
Dazhong yakagamuchira vashanyi zviuru zana nemakumi mashanu panguva yeMutambo weChirimo wegore rino uye musha uri chikamu chebhandi rekumutsiridza kumaruwa iro chiremera cheLiubao changa chiri kuedza kuvaka.
Chinangwa ndechekugadzira yakasarudzika "tii mugwagwa", dzimba dzekugara dzekumaruwa uye mapaki etii egirinhi ekuona, uye kugadzira yakasarudzika nzvimbo, ine misha inoratidza akasiyana maitiro, Cao anodaro.
Liubao tea museum inopa vashanyi kuravira kwakadzama kwezvinobatanidzwa mukuunza chinwiwa chinozorodza mukapu yemunhu.
Khani Fariba naIshtiaq Ahmed, vaviri vekuIran, vakashamiswa nerudo rwakabatana netii panguva yekushanya kwavo kumuseum.
Muchikamu chekutanga chezana ramakore rechi20, vagari vaipa Liubao tii nemunyu kune mwenga kuratidza rudo runogara kwenguva refu, sezvo tii inotangira mugomo uye munyu uchibva kugungwa.
Mumusha uri padyo weTangping, mugari wenhaka yenhaka isingabatike, Wei Jiequn, makumi matanhatu nematanhatu, nemwanasikana wake Shi Rufei, makumi matatu nemana, vanga vachiomerera kumaitiro echinyakare, anosanganisira kuomesa, kubika uye kuvirisa mashizha.
Vari kuita musangano mumusha umo vashanyi vanogona kudzidza nezve Liubao tii tsika nekuona tsika yekugadzira yechinyakare.
Shi anga ari mutungamiri mukubatsira vagari veko kuwedzera mari yavo kuburikidza nekugadzira tii. Shi akasimbirira mukugadzira nzira dzechinyakare dzekugadzira tii uye anogovera zvaakasangana nazvo nemhuri dzeko dzekumaruwa.
Kubva 2017 kusvika 2020, nzvimbo yeLiubao yekudyara tii mudunhu reCangwu yakawedzera kubva pa71,000 mu (4,733 mahekita) kusvika 92,500 mu, sekureva kwehurumende yenzvimbo. Kugadzirwa kwetii kwepagore kwakabva pa2,600 tonnes kusvika 4,180 tonnes in that three-year period, ine value yekubuda yakapetwa kaviri kubva pa310 million kusvika 670 million yuan.
Muna 2025, kukosha kwekubuda kweLiubao tii kubva kuWuzhou kuchasvika kudarika mabhiriyoni makumi mashanu eyuan, anodaro Zhong Changzi, meya weWuzhou.
"Pamusoro peizvi, ticharamba tichifambira mberi kugadzira indasitiri ye100 bhiriyoni yeyuan," Zhong anodaro.